Henjehina ny fanaparitahana tsaho any Vohipeno • AoRaha
Henjehina ny fanaparitahana tsaho any Vohipeno
Fantatra fa vaovao tsy marina sy tsaho no naparitaka tao amin’ny tambajotran-tserasera “Facebook”, tamin’iny faran’ny herinandro iny, momba ny tsy fahampian’ny taova tao amina lehilahy iray maty tany Vohipeno. Hanaovana fanadihadiana ny olona nanaparitaka ny tsaho, araka ny nambaran’ny eo anivon’ny Fampanoavana, any Manakara.
“Nofongarina, tamin’ny talata 18 febroary, ny razana. Teo anatrehan’ny manam-pahefana maro sy ny fianakaviana mana-manjo no nanaovana ny fizahana hanamarinana ny ahiahy. Hita tao avokoa ny taovan’io lehilahy io, indrindra ireo nolazaina fa tsy tao, toy ny fo sy avokavoka”, araka ny fanampim-baovao avy amin’ny tompon’andraikitra ao amin’ny Fampanoavana any Manakara.
Voatonona tao amin’ny vaovao niparitaka ny anaran’ny hopitaly nitsaboana sy nahafatesan’ilay lehilahy. Nametraka fitoriana noho ny fanalam-baraka niseho ny tompon’andraikitra ao amin’io hopitaly io. Avy tamin’izany no nanokafana ny fanadihadiana.
Tifitra teny Antsahabe Nitsoaka any Toliara ireo namono an’ilay mpitondra môtô
Voina nahafaty Lehilahy main’ny herinaratra teny ambony tafon-trano
Fisamborana olon-dratsy Andiana mpamaky trano tratra niaraka tamin’ny basy
Asan-jiolahy :: Ropolo lahy nanafika tanàna sady nandroba omby
Ahiahy tafikan-taova :: Lehilahy fito nogadraina sady enjehina tamin’ny halatra voamaso